Maitiro ekugadzirisa iPhone yako | Nhau dze iPhone
Maitiro ekugadzirisa iPhone yako
Miguel Hernandez | | iPhone, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Yako iPhone, kunyangwe ichive chigadzirwa chine software uye Hardware inofamba yakabatwa ruoko, haina kusunungurwa kubva mumatambudziko ehunyanzvi, sezvingaitika kune chero chimwe chigadzirwa chetekinoroji chine aya maitiro, zvisinei nerudzi.
Ndokusaka tinoda kukudzidzisa maitiro ekugadzirisa iPhone yako nenzira iri nyore yekugadzirisa matambudziko ose aungave nawo. Nenzira iyi, iwe uchaita "yakachena" yekuisa software yemudziyo wako uye nekudaro kugadzirisa chero kukanganisa kunogona kukonzera kusawirirana pakati pesoftware nehardware. Chinhu chimwe chete chauchazodemba kusaverenga izvi nekukurumidza.
1 Chii chinosanganisira kufomatidza iPhone yako?
2 Chinhu chekutanga: backup
3 Maitiro ekudzoreredza yako iPhone pasina PC
4 Maitiro ekugadzirisa iPhone yako kubva paPC yako kana Mac
5 iPhone yangu inoratidza apuro chete
Chii chinosanganisira kufomatidza iPhone yako?
Chekutanga pane zvese, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mune jargon yeApple world kazhinji, mudziyo hausi kuzoumbwa, asi kuti uchazove. dzosera. Zvisinei, iwo mazita kana nzira dzokudaidza nadzo zvinhu zvisingachinji chinhu zvachose. Chokwadi ndechekuti uri kuenda kufomati yako iPhone, kureva kuti, uri kuzodzima iyo Operating System uye woidzosera nekukurumidza uye nyore.
Zviripachena kuti mufananidzo wakakosha mazwi ane chiuru, ndosaka tichikusiira iwe pamusoro peiyi tutori vhidhiyo kubva kune yedu YouTube chiteshi. YouTube nematanho ese.
Chinhu chekutanga: backup
Zvinokurudzirwa zvikuru kuti kana tiri kudzoreredza mudziyo nekuti isu tine software nyaya dziri kukanganisa kuita kwe iPhone yedu sekunyanya kushandisa bhatiri, reboots, kana maapplication asiri kushanda nemazvo, kuti tirege kudzorera backup. Nekudaro, ini ndinogara ndichikurudzira kuti isu tiite backup ye iPhone yedu tisati tadzoreredza nekuti panogona kunge paine imwe mhando yeruzivo kana application ine zvirimo zvatisingade kurasikirwa, uye zvinogona kunge zvanyanya kunonoka.
Ndosaka ini ndichikurudzira kuti iwe uite backup zvakananga paPC yako kana Mac, kuburikidza nechokushandisa. Kunyangwe iyo inokurumidza nzira ndeye backup kuburikidza neCloud, ini ndinogara ndichikurudzira "yakazara" backup pane PC yako kana Mac.
Kana tangobatanidza iyo iPhone kuburikidza ne USB uye chishandiso chavhurwa, ngatidzvanye bhatani "Chengetedza backup yeese iPhone data" asi kutanga tichasarudza sarudzo "Encrypt local backup", Muchiitiko ichi, ichatikumbira password yatinofanira kuyeuka uye kuchengetedza kwe iPhone yedu kunosanganisira marudzi ese eruzivo rwemunhu senge makiyi, mafoto, manotsi uye kunyangwe zvemukati zvemukati zvekushandisa. Iyi ndiyo yakanakisa backup yaunogona kugadzira uye iyo yandinokurudzira kuti ugare uchichengeta.
Maitiro ekudzoreredza yako iPhone pasina PC
Vazhinji vashandisi havazvizive, asi pane mukana wekudzoreredza iyo iPhone pasina kuenda kuMac yako kana PC yako, ndiko kuti, dzosera iyo iPhone zvakananga kubva kune iyo terminal pachayo. Nokuda kweizvi, chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuenda Zvirongwa kudzvanya pane yekutanga sarudzo, uko Apple ID yedu iripo, ipapo isu tichasarudza sarudzo "Tsvaga" uye mukati meizvi isu tichadzima sarudzo "Tsvaga Iphone yangu". Kunyange iyo iPhone iripo isu hatigone kuifomatidza pasina imwe ado.
Iye zvino tinogona kudzokera kuchikamu «Zvirongwa», kutevera nzira inotevera: Settings> General> Transfer kana reset iPhone> Dzima zvirimo uye marongero.
Pamusoro peiyi sarudzo yambotaurwa, inova ndiyo inotitendera kufomatisa iyo iPhone, isu tine imwe nhevedzano yedzimwe nzira dzakadai se:
Dzorerazve network marongero
Bvisa zvirongwa zvese zvefoni
Gadziridza duramazwi rebhuruu
reset home screen
Dzorerazve nzvimbo uye kuvanzika
Kunyangwe idzi sarudzo dzekupedzisira dzisiri dzatinoda. Kana tabvuma sarudzo ye "Bvisa zvirimo uye zvigadziriso" tinoenderera mberi nekugadzira iPhone yedu.
Maitiro ekugadzirisa iPhone yako kubva paPC yako kana Mac
Sarudzo yangu yandinofarira ndiyo chaiyo sarudzo ye rdzosa iPhone yako kubva kuPC kana Mac pabasa, sezvakaratidzwa muvhidhiyo iri pamusoro. Iye zvino isu tichasarudza kana isu tichaisa iyo vhezheni yeIOS inowanikwa pamaseva eApple, kana iyo yatakatora mundangariro yePC yedu kana Mac.
Kana isu tichida kudhawunirodha iOS vhezheni kunze kweiyo yazvino tinogona kuenda kune mawebhusaiti Chemhondoro iPSW.me kwatichawana mavhezheni ese, ayo acharatidzwa kana ari echokwadi, ndiko kuti, akasainwa neApple. Mavhezheni asingachasainwe neApple haatibvumidze kuti timhanye iyo iPhone, saka unofanira kungoisa idzo dzinoenderana.
Muchiitiko ichi, zvichave zvakakwana kuti isu titore iOS uye tinya "shift" kiyi uye panguva imwe chete negonzo pabhatani. "Dzosera iPhone" mukati mezvisarudzo zvinopihwa nemenu imwechete kwatakaita backup.
Kana, zvakasiyana, zvakakwana kuti isu tiise iyo iOS vhezheni inobata, isu tinongodzvanya bhatani "Dzosera iPhone" uye isu tichafamba kuburikidza nemenu iri nyore. Nekudaro, muchikamu chino PC kana Mac ichatanga kurodha yazvino vhezheni yeIOS, saka zvichienderana nekuzara kwemaseva eApple basa iri rinogona kutora nguva, zvinoenderana, pakati pezvimwe zvinhu, painternet yedu yekubatanidza nekumhanya kwayo.
iPhone yangu inoratidza apuro chete
Muchiitiko chekuti iPhone yako yave nedambudziko rakakura resoftware, inogona kungoratidza apuro pachiratidziri. Panguva ino tinofanira kuisa iPhone mune inozivikanwa seDFU Mode uye kutevera matanho akataurwa yapfuura pfungwa.
Kuti uise iPhone yako muDFU Mode iwe uchada:
Unganidza iyo iPhone kuPC kana Mac kuburikidza netambo uye ita shuwa kuti yazviona.
Dhinda Vhoriyamu +
Dhinda bhatani reMasimba kwemaminitsi gumi
Ndichiri kuenderera kudzvanya bhatani reMagetsi, tinya Vhoriyumu- bhatani kwemasekonzi mashanu
Sunungura bhatani reSimba uye bata Volume- bhatani pasi kwemamwe masekonzi gumi
Uye idzi ndidzo nzira dzese dzekudzosera iPhone yako, sezvaunoona iri nyore uye yakagadzikana yekuvandudza software yemudziyo wako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa iPhone yako
Sei iPhone yangu isiri kuchaja?
iPhone 14 Pro blueprints inoratidza kuti yakakora